San Francisco Bay Area Burmese 88 - 23 year Event
Donation to Oakland Burmese Monastery
88 - 23 Year Event - Video ARCHIVES
ဒီတပတ်မှာ ဗီဒီယိုကောက်နုတ်ချက်အစီအစဉ်အဖြစ် အောက်ပါ မှတ်တမ်းများကို
မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သည်မှာ ကြည့်ရှုအားပေးပါ။ ၈လေးလုံး ၂၃နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား (ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာ) ညီညွတ်ရေးအငြိမ့် အစီအစဉ်
Youth Association က ဖြိုးပါလေး၊ နေဘုို၊ ကျော်ပေါက် တို့က လူရွှင်တော်များ၊ နဲ့
ဥက္ကလံမြို့က နှင်းဆီဖူး၊ စပယ်ဖြိုးတို့က အငြိမ့်မင်းသမီးများအဖြစ် ပါဝင်ပါတယ်။
ဆန်ဖရန်မြန်မာဒီမိုအင်အားစု ၈၈အခမ်းအနား ရသုံးငွေစာရင်းထုတ်ပြန်လက်ကျန်ငွေကို ဥက္ကလံမြို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝေယျဝစ္စအတွက် လှူမည်မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ သြဂုတ် ၂၄၊ ၂၀၁၁ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ စုပေါင်းကျင်းပတဲ့ ၈လေးလုံး ၂၃ နှစ် အခမ်းအနားကျင်းပရေး အလုပ်အဖွဲ့က နောက်ဆုံး ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို အများပြည်သူနဲ့ အလှူရှင်များအားလုံးကို အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အလှူခံရရှိငွေနဲ့ စုပေါင်းထည့်ဝင်ငွေ စုစုပေါင်း ၂၈၅၅ ဒေါ်လာ ရရှိပြီး လက်ကျန် ၃၇၆.၈၃ ဒေါ်လာ စာရင်းရှိကြောင်းနဲ့ လက်ကျန်ငွေကို ဥက္ကလံမြို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ သာရေး၊ နာရေး စုဝေးရာ ဓမ္မအေးရိပ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အထွေထွေကျောင်းစာရိတ်အတွက် လှူဒါန်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။
အဲသည်လို လက်ကျန်ငွေထွက်လာရတာက ခမ်းမကုန်ကျစာရိတ်ထဲမှာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအတွက် စာရိတ်ကို မပေးဆောင်ရလို့ဖြစ်တယ်လို့ ပွဲစီစဉ်သူတွေက ပြောပါတယ်။ အခြား လက်တင်အမေရိကန်ကွန်မြူနီတီပွဲတော်ကြီးနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့ ကျောင်းမြေနေရာရဲ့ ပရ၀ုဏ်ကို အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေက ငှားယမ်းလိုက်ကြတာကြောင့် စာရိတ်သက်သာသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သို့သော်ကျောင်းအာဏာပိုင်တွေက နောက်ပိုင်းမှ စာရင်းပြန်ရှင်းခိုင်းရင်လည်း အဆိုပါ ကျသင့်ငွေတွေကို ၀ိုင်းဝန်းကြတဲ့ အစုအဖွဲ့တွေက စိုက်ပေးကြမယ်၊ လက်ရှိလက်ကျန်ငွေကိုတော့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွက် လှူဒါန်းလိုက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။၈လေးလုံးအခမ်းအနား အစီအစဉ်နဲ့ ပြခန်းများ၊ စင်မြင့်တင်ဆက်မှုများအတွက် လုပ်အားပေးဆောင်ရွက်သူများအနက် စင်မြင့်ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပြခန်းကိစ္စများအတွက် အထူးဝါယမစိုက်ထုတ်ကြတဲ့ ကိုကျော်လှမြိုင်၊ ပန်းချီဇော်မှိုင်းနဲ့ ကိုဝင်းလှိုင် (NLD – MP) တို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း အခမ်းအနားကျင်းပရေးအဖွဲ့က မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ အမည်နာမ မခံဘဲ ၀ိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ စေတနာရှင်၊ အလှူရှင်နဲ့ လုပ်အားပေးတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလိုတယ်လို့ စီစဉ်သူအလုပ်အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာက မြန်မာတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ လက်တွဲပြီး အင်အားတွေ တိုးချဲ့ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ထောင်စုအရေး၊ အမျိူးသားရေးတွေ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားကြမယ်လို့ ဆန္ဒရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စာရင်းရှင်းတမ်းကို သည်နေရာမှာ ကြည့်ပါ။ အခမ်းအနားဗီဒီယို မှတ်တမ်းကို သည်နေရာမှ သွားကြည့်ပါ။(ဓာတ်ပုံ - ကိုကိုလေး၊ အခမ်းအနားမြင်ကွင်း)
Finance Report - Balance to donate to Oakland Burmese Monastery
Burma Day - Flag Raising Ceremony - 8th August 2011 from Ko Ko Lay
http://www.flickr.com/photos/25599354@N08/sets/72157627389229690/ FLAG RAISING CEREMONY - 8th Aug 2011, Berkeley
http://www.flickr.com/photos/25599354@N08/sets/72157627378464464/23rd Anniversary Commemoration Event, Oakland, 6th August 2011 Posted by
Photo Album of the Event Slide Show
Photo Album # 1 of the Event - contributed by Jason
Congratulation to SF Burmese Community for successfully hosting the event
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာတို့ ၈၈ - ၂၃နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကျင်းပပြီးစီးမိုးမခ၊ သြဂုတ် ၇၊ ၂၀၁၁ယမန်နေ့ နေ့ခင်းက ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာ၊ ဥက္ကလံမြို့၊ ဆီဇာရှေးဗတ်ဇ် ကျောင်းရိပ်သာတွင် မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၏ ၈လေးလုံး ၂၃နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို စုဝေးကျင်းပကြသည်။ မြန်မာဧည့်ပရိသတ် ၁၀၀ ကျော် တက်ရောက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘေးဧရိယာအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် တိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့၏ ပြခန်းများ၊ ရှင်းလင်းတင်ဆက်မှုများအပြင် မြန်မာမိသားစုများ၏ စင်မြင့် တင်ဆက်မှုများဖြင့် စည်ကားစွာ ကျင်းပသွားသည်။သံဃာတော် စုစုပေါင်း ၇ ပါးကို ပင့်ပြီး ဆွမ်းကျွေးတရားနာခြင်း၊ ဘာသာပေါင်းစုံက ပုဂ္ဂိုလ်များက ၀တ်ပြုဆုတောင်းပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။ တက်ရောက်လာသော ဧည့်ပရိသတ်ကို အများစုပေါင်း ချက်ပြုတ်သည့် မြန်မာဟင်းလျာများ၊ မုန့်ဟင်းခါး တို့ဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံကြသည်။၎င်းနောက် အခမ်းအနာကို ကျင်းပရာ အမှာစကားများပြောကြားခြင်း၊ သ၀ဏ်လွှာများ ကြေညာချက်များ ဖတ်ရှုခြင်း၊ တေးဂီတ၊ ကဗျာ၊ သရုပ်ဖော် သရုပ်ပြတင်ဆက်မှု၊ ရုပ်သံတင်ဆက်မှုများဖြင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့က ၈၈ အထိမ်းအမှတ်ကို ဂုဏ်ပြုတင်ဆက်ကြသည်။ မိမိတို့ စည်းလုံး ညီင်္ညွတ် ချစ်ခင်ကြရန်၊ လက်တွဲသွားကြရန် ဖော်ကျူးသော ဘေးဧရိယာမြန်မာမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တို့၏ ညီညွတ်ရေးအငြိမ့်ကို ပရိသတ်က အထူးနှစ်သက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ခန်းမတွင် ခင်းကျင်းပြသထားသော ၈၈ အရေးတော်ပုံ အထိမ်းအမှတ် ပြပွဲ ပြခန်းများကိုလည်း လူအများက စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုအားပေးကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဥက္ကလံမြို့၏ ပန်းချီဆရာ ဇော်မှိုင်း၏ အနုပညာတင်ဆက်မှုများကိုလည်း ပရိသတ်က နှစ်သက်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ချင်း၊ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်၊ ၈၈ အရေးတော်ပုံစသည့် ပြခန်းတင်ဆက်မှုများကို ဇော်မှိုင်းနှင့် ဥက္ကလံအခြေစိုက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်များက ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ေအားပေး တင်ဆက်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းများအနက် အများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိနေသော ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် မြန်မာစစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေကြပုံကို ရုပ်သံတင်ဆက်မှု၊ ပြခန်းတင်ဆက်မှုတို့ဖြင့် Kachin Heritage organization ၏ တင်ဆက်မှုကိုလည်း အများက စိတ်ဝင်စားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။အခမ်းအနားတွင် ၈၈ မျူိးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းမြင့်အောင်၏ သ၀ဏ်လွှာကို ဖတ်ကြားခြင်းနှင့် အင်န်အယ်ဒီပါတီခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်၏ အမှာစကားကို ထပ်ဆင့်ပြန်လည် ပြောကြားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ဓာတ်ပုံ အယ်လဘန်ကို သည်နေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပြီ။http://sfbc88.blogspot.com မှာလည်း ဓာတ်ပုံများ ရုပ်သံများ တင်ဆက်ထားမည် ဆိုသည်။
88 - 23 Year Event Booklet - Free Distribution
23rd Anniversary of 8888 Burma Uprising - SF Burmese Event - Booklet
DPNS - US Branch - Statement to the SF Event
23_88 Statement _ DPNS - Us-branch
88 GS Letter to the SF Bay Event
88 GS letter to Burmese Democratics in SF Bay Area for 23rd Ceremony of 8888
ABSDF statement - 88 - 23 Year Anniversary
ABSDF Statement on 23rd Anniversary of 8888
88 - 23 Years Statements from 88GS
The Statement of 88GS on 23rd Anniversary Day of 8888
Our Program in Detail is now finalized
Updated as of 5th August 2011
88 - 23 Year - Song Presentation from Japan, Ko Thaw
To Public Event with San Francisco Bay Area Burmese Democratic ForcesDate: 6th August, 2011 Time: 10:30 AM to 4:30 PM (Commemoration Event)Place: Cesar E. Chavez Education Center, 2825 International Blvd, Oakland, CA 94601Date: 8th August, 2011 Time: 8:08 AM to 9:09 AM (Flag Raising Ceremony)Place: City of Berkeley - City Hall‎, 2180 Milvia Street, Berkeley, CA 94704ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာ မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်၈လေးလုးံအရေးတော်ပုံ အခမ်းအနားနှင့် ပြပွဲ၊ သြဂုတ် ၆ (စနေနေ့) ၂၀၁၁၊ မနက် ၁၀နာရီ ခွဲက ညနေ ၄ နာရီ ခွဲ။Place: Cesar E. Chavez Education Center, 2825 International Blvd, Oakland, CA 94601၈လေးလုံးအရေးတော်ပုံ အထိမ်းအမှတ် အလံတင်အခမ်းအနား၊ သြဂုတ်လ ၈ (တနလာင်္နေ့) ၂၀၁၁၊ မနက် ၈ နာရီ ၈ မိနစ်
1. ABSSF2, Karen Youth Organization3. Kachin Heritage Organization4. Rakhine Women's Union5. NLD -LA (USA branch)6. DPNS (USA branch)7. Tri-Color8. BADA9. BAWA10. MoeMaKa News
For Media & Press -Ko Toe Lwin (415-424-5811) and Ko Nyunt Than (510-220-1323)Sub-Committee -Programs - Ko Khaing Gyi (925-207-5696)Stage Performance - Ko Win Hlaing (415-368-7003)Information - Ko Maung Yit (510-851-6501)Finance - Ma Aye Yi Htay, Ma Mie Mie, Ma Chan Mya AyeOutreach - Aung Zar Ni (510-967-4096)
Our Volunteers Community
1. BYA2. Shan Community3. SHAA
Reference Links for 88 Burma
2007 Sept. Saffron Song from Burma
88 Song of Burma (Naing Myanmar)
Burma National Song (Mar Mar Aye)
List of Political Prinsoners
Saffron Song by Mar Mar Aye